“Waxaan Ilaawaba Saw Nin Xumi Ima Ogaysiiyo” Wasiir Cali Mareexaan Oo Faallo Ka Bixiyey Khubdaddii Farmaajo ee 26 June | Somaliland Today
← SLT SPORTS: Xidiga Muslimka Ah ee Paul Pogba Oo Ka Hadlay Nolosha Muslimiinta ee Magaalada Manchester Kadib Qaraxyadii Ka Dhacay.
“Waxa Booqasho Inoogu Yimi Wefti Ka Socday Safaarada Maraykanka Oo Uu Hoggaaminaayo Safiirka Maraykanka Ee Soomaaliya” →
“Waxaan Ilaawaba Saw Nin Xumi Ima Ogaysiiyo” Wasiir Cali Mareexaan Oo Faallo Ka Bixiyey Khubdaddii Farmaajo ee 26 June
Cabdi yusuf Ducale Boobe siyaasi, qoraa, halgamaa iyo taarikhyahay afkaaga caano lagu qabay. Waxaan dhegaystay jawaabtii uu siiyey Farmaajo oo runtii ahayd jawaab culus oo cilmi iyo waayo aragnimo ku dhisan.
Farmaajo laftiisa khudbadiisa waan dhegaystay waxaana uu calaalinayey hadalka iyo magacyada waxaanay u muuqatay magacyadii uu akhriyayey in aanu hore maqal ee loo soo qoray, waayo Cali Sugule ugumuu yeedhaan Cali Sugul hadii uu hore u maqlay. Bakhad Casna waad maqlayseen sidii uu ugu dhawaqayey.
Hadaba taariikhda uu u saxay aqoonyahay Boobe waxaan ugu darayaa laba armood oo uu dhexfadhiistay. Ta koobaad wuxuu sheegay in dadkii reer Hargaysa ee fagaaraha isugu yimi 26 june 1960 ay dalbanayeen in laysu keeno walaalahooda koorfurta. Taasi sax may ahayn waayo umadaasi waxay dalbanaysay shantii soomaliyeed waxaana ay markaa iyo ka horba ku heesi jireen” shantoo isweheshataa wacnaydaa calan inay wadaagaan wacnaydaa. Hawdoow haybtaadiyo hayso calankaaga. Wajeereey calanka hoo iyo jabuutaay ka soo hoyo hororkiyo waraabaha. Waan hubaa in aanu farmaajo weligii heesahayaa maqlin.
Khaladka labaad ee umada somaliland oo dhan ka yaabiyey wuxuu ahaa markii uu isyidhi xisbiyadii dhaliyey 26 june ee la dagaalamay Igiriisa ka sheekee ee uu ku sheegay SNL, SYL iyo USP. Hadaba goorma ayay SYL u dagaalantay xornimadadii Somalialnd ee 1960 miyaanuse weligii maqal SNL, USP iyo NUF.
“Nin ambaday halkuu aaday way ula ekoonaatay”
Ugu danbayn waxaa iiga soo baxay hadalkii Madaxwayne Farmaajo in uu ahaa nin taariikhda ku ciilqaba. Waxaan ku soo gebegaybaynayaa ” saw waxaan ilaawaba nin xumi ima ogaysiiyo”